आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल २ फाल्गुण २०७७ आइतबार | Pahara Nepal
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल २ फाल्गुण २०७७ आइतबार
14th February 2021 , 8:52 AM
श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ शिशिर ऋतु वि.सं. २०७७ फाल्गुन २ गते आइतबार तद्अनुसार सन् २०२१ फरवरी १४ तारिख माघ शुक्लपक्षको तृतीया तिथि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र सिद्धि योग तैतिल करण आनन्दादिमा चर योग चन्द्रमा कुम्भ राशिमा १०ः१३ बजेसम्म त्यसपछि मीन राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः४४मा र सूर्यास्त साँझ १७ः५३ मा हुनेछ ।
मेष – बौद्धिक र सृजनात्मक काम होला । प्रेममा सफलता हासिल हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभावमा वृद्धि होला । आफूतिर अरुलाई तान्ने क्षमता बढ्नेछ । सुख–सुविधासित सम्बन्धित काम बन्नुको साथै वार्तामा पनि सफलता मिल्नेछ । धरको सुखशान्ति बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । मान पुरस्कार पाइनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ सफलता प्राप्त होला । मनोकूलको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । रसरागप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
बृष – शुभ काममा सफलता प्राप्त होला ।सन्ततिसुख बढ्ला । आयस्रोत बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार प्राप्त होला । सुख समृद्धि आरोग्यता बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । मान सम्मान बढ्ला । विजय मिल्नेछ । सौर्य बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्ला । धर्म कर्ममा रुचि बढ्ला ।
सिंह – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । सुख समृद्धि मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । साहसिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आशा उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ सफलता मिल्नेछ । यशवर्चश्व बढ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । धनसम्पति बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । संघर्षरत रहनुहुनेछ ।
कन्या – वार्तामा सफलता मिल्नेछ । धन सम्पत्ति बढ्ला । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । यात्रा हुनेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । सुख शान्ति बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । प्रेमपात्रको मायास्नेह मिल्नेछ । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछन् । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ ।
तुला – भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । भागदौड लागि रहला । शारीरिक र आर्थिक काममा प्रगति होला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछन् । शैक्षिक, बौद्धिक, कलात्मक, गीतसंगीत आदि कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ ।
वृश्चिक – विवादप्रति सचेत भइ अरुको भरमा नपरेर काम गर्नु हितकर रहला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव भने बढ्नेछ । गीतसंगीत र रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । यात्रापरक काम बन्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ । इष्टमित्र सन्तानसुख बढ्ला ।
धनु – आरोग्यता बढ्ला । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक उनन्ति हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पदवी भेट्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । सुख सम्पति बढ्नेछ ।
मीन – स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्नेछ । खर्च बढ्नेछ । यात्रापरक काममा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बनिरहला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्ला । मनोकुलको काम बनेर मन प्रशन्न भैजानेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको बस्तुमा खर्च बढ्ला । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । जीवनसाथीको साथ प्राप्त होला ।
नयाँ मन्त्रीमन्डल पुर्नगठनमा गृहमन्त्रीमा महेश बस्नेतको सम्भावना
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल १ फागुन २०७७ शनिबार